Games ho an'ny ankizivavy 7 taona an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Games ny ankizivavy 7 taona
ankehitriny solosaina kilalao mety hahafinaritra mihitsy aza ankizy, ary satria 7 taona an-tserasera lalao dia tanteraka noho izany. Ary noho izany ny be taona nanome maimaim-poana fifantenana ny lohahevitra sy ny tari-dalana ny hazakazaka ho amin'ny lojika kilalao. Sariitatra litera sy avy amin'ny andian nandritra ny fotoana ela aina nanorim-ponenana amin'ny virtoaly sehatra sy manolotra hametraka-tsaina, loko sary, milalao mahandro sy nanny, hanorina tanàna, mba ho tonga mpitsongo sy mitady very zavatra, hikarakara ny kely biby, nasiana rojo olo-malaza sy ny maro hafa mahaliana zavatra.
Na izany aza tany hafa
Handringanana resabe iny biby fiompy
Rasstelyayte azy rehetra
Ny famongorana ny vato
Rakitry ny Asia
Miampita ny lalana
Baby Hazel: a tapaka sandriny
Baby Hazel mandihy toy ny Ballerina fisaka
Puppy Patrol: Puppies hamonjy ny namany!
Gravity Falls: efitra ambanin'ny tafo Golf
Ny feon-kira Looney Show: mpiara-monina
Lalao 7 taona tamin'ny Category:
Farany Games ny ankizivavy 7 taona
PAW Patrouille Pup Pup Boogie matih mivoatra
Nangoraka i George Hatry
Lalao Online Rehetra Games ho an'ny ankizivavy 7 taona an-tserasera
Ny taona ny nandroso solosaina mamela teknolojia tsy misy olona tsy miraharaha ny virtoaly zava-baovao sy mampientam-po ny fialam-boly. Tsy misy afa, ary ny mpihaino ny ankizy, izay sambatra ary misy lalao kafanam-po mandray ny vaovao. Mazava ho azy, ny fialam-boly ny ankizy ao amin'ny Internet – ny sokajy izay tsy maintsy ho tanteraka amin'ny ray aman-dreny maso, fa tsy azo atao ny hihaona foana ny Bona fide vokatra lalao ho an'ny ankizy. Fa miaraka amin'ny toerana ny ankizy Ho faly hilalao afa-tsy ao tsara kalitao sy mahaliana lalao. Ary tena fotoana tianay io dia hibodo eo amin'ny fiainan'ny zaza rehetra, dia niakatra ho any ray aman-dreny ihany.
Fanabeazana lalao ho an'ny ankizy 7 taona
izahay manolotra ny tsara ny lalao ny 7 taona ny tovovavy maimaim-poana sy tsy misy fisoratana anarana. Ny Travel fotoana ny fitsidihana tsirairay dia tsy ela, raha mbola mipetraka eo amin'ny solosaina, mankany izao na izao lalao, dia tsy ilaina. Ity sokajy ity ny lalao natao manokana ho an'ny zaza ny fomba fijery sy ny fahatakarana ny foto-kevitra mahaliana ny ankizy sy ny tiany. Miaraka amin'ny fialam-boly mirona lalao ireo hitondra ny fivoarana sy ny fandroson'ny ara-pahalalana sy ny vary. Eto dia afaka mahita fialam-boly, afaka ny hitombo sy manefy
eritreritra sy ny famoronana.
Izany rehetra izany no nanao izany fa ny dingana ny fanofanana sy ny fampandrosoana dia tsy afaka Mandositra ny zaza, sy ny mifamadika amin'izany – ary mitondra liana ny.
Lalao ho tombontsoan'ny ankizy
Ireo tena mahafinaritra sy maso miloko mahafinaritra, mavitrika sy milamina, miaraka amin'ny mozika mahafinaritra arahina. Noho izany dia afaka mora foana ankizy hahafehy ny sarotra noho ny matematika, ny fiteny sy ny olana hafa, sy ny siansa, ohatra, biolojia sy ny jeografia. Vao haingana – Ity lalao ity, ny asa izay mba hanaparitahana ny biby amin'ny faritra sasany amin'ny tany, marina izay misy azy ireo. Fiteny Games – fa mahafinaritra ny hanampy hianatra teny sy ny fitsipi-pitenenana. Tsy ampy ihany koa ny mamiratra fitomboana vokany manana lalao mazes, Puzzles, karohy ny zavatra, ny hira sy ny olon-kafa. Active Games ny andiana brodilok sy ny fifaninanana ho an'ny vanim-potoana io fanehoan-kevitra dia manampy mampitombo haingana, fahaizany mamikitra, fahavononana – Izay rehetra Tena zava-dehibe ho an'ny rehetra, ao anatin'izany ny kely. Ireo rehetra ireo lalao mampiasa ny toerana tena sariitatra sy ny Fairy-angano endri-tsoratra, izay tia ny ankizy fotsiny izy ireo, ary hankafy ny fandaniana fotoana ao amin'ny virtoaly toerana. Noho izany, tsy maintsy hanesorana ny tsaho fa ny lalao video ho an'ny ankizy no manimba sy tsy misy ilana azy, araka ny zavatra rehetra dia tokony ho araka ny antonony sy tsy misy habibiana, ary ny fialam-boly no tanteraka voasaron'ny ireo fepetra ireo.